Ụbọchị My Pet » 3 Ihe Kpatara ghara Were gị nwa nkita On A mbụ Ụbọchị
Otu di na nwunye afọ gara aga, a enyi nyere m aha na nọmba ekwentị ma kwuru na ya na enyi ya na-atụ anya na m ka m na-akpọ na-ajụ ya si. M chere na ihe n'èzí play ga-abụ a fun mbụ ụbọchị. Anyị ga-a picnic, kalama mmanya, blanket na-enwe a mara mma n'oge okpomọkụ mgbede ọnụ. M ziri ezi banyere nile nke na.
Nke a na-ìsì ụbọchị mere-adaba m nwa nkita ọdụ ihe kemmato 10 izu ochie Golden Retriever. Echere m na nke a ga na-atụkwasị ihe na ụbọchị otú ahụ ka m wee kpọtara ya tinyere. Kama, m fun obere enyi bịara ịbụ a ndọpụ uche. Ebe a na-atọ mere o ghara iji gị nwa nkita on a mbụ ụbọchị:
1. The nwa nkita garnered a otutu ntị nke etre mkparịta ụka anyị
Ọ dịghị mgbe anyị ike n'ezie ga-esi n'ime onye ọ bụla ọzọ. Puppies, ma ọ bụ anu ulo n'ozuzu, dị ukwuu Ebido Mkparịta Ụka, ma na pụtara na onye ọ bụla chọrọ ịjụ ya otú ochie na ọ bụ.
2.N'ihi na m nwere a nwa nkita na bụghị onye okenye nkịta, ọ chọrọ anya mgbe nile
Nke a pụtara na anyị ndị ọzọ babysitters nke nkịta karịa otu di na nwunye na otu ụbọchị na a atọ enyi nkpado tinyere.
3.Nwa nkita poo bụ kpọmkwem ihe aphrodisiac
Ọ bụrụ na ị nwere okenye nkịta, na potty izu ga-eme obere mgbe na ị nwere obere ihe akara na mgbe na ebe a eme.
Ná ngwụsị nke abalị, M n'ezie na-eche dị ka m nwere ọtụtụ ihe nke a ohere ga-esi mara m ụbọchị. Si ebu na nkịta (ebe ọ bụ na ọ na-mụtara ije ije na a leash ma) ka nhicha mgbe ya ka na-ekere òkè otú ochie na ọ bụ na ọtụtụ narị ndị nwere mmasị na-amabughị, Adị m ka m anọwo m na-arụ ọrụ abalị dum kama na-amata a mma nwa agbọghọ. E nweghị nke abụọ ụbọchị, ma m utara ihe bara uru. -Ahapụ nwa nkita n'ụlọ maka a mbụ ụbọchị.
7 AFỌ Onye ọ bụla Site New York City aga On